Ọgbọ ndị bụ isi bụ ọrụ dị mkpa maka ndị ahịa ahịa. Ha na-elekwasị anya na ịchọta, itinye aka na ịtụgharị ndị na-ege ntị lekwasịrị anya na atụmanya nke nwere ike ịghọ ndị ahịa. Ọ dị oke mkpa maka azụmaahịa ịmepụta atụmatụ azụmaahịa nke na-eme ka ọgbọ na-edu ndú.
N'iburu nke ahụ, ndị ọkachamara n'ịzụ ahịa na-achọkarị ụzọ ọhụrụ ha ga-esi pụta ìhè, karịsịa na ụwa a na-ejikarịkarị mba. Imirikiti ndị na-ere ahịa B2B na-atụgharị na email, na-ele ya anya dị ka ọwa nkesa kachasị dị irè maka ọgbọ na-achọ. N'ihi na ọ na-ewu ewu, email nwere ike isi ezigbo ike ịkwụsị ma dọta uche. Agbanyeghị, ịnweghị ike ileghara email anya. Dị ka Radicati Group si kwuo, enwere akaụntụ email karịrị ijeri 6.69. Statista na-arụ ọrụ ahụ ọnụ ọgụgụ nke ndị na-arụ ọrụ email ga-egbu 4.4 ijeri site na 2023.
Ndị ụlọ ọrụ chọrọ ụzọ ọhụrụ iji ruo atụmanya na mpụga ozi ịntanetị. Olileanya ọ bụla dị iche, yabụ ekwesịrị ịhazi nkwukọrịta ha.
Vidiyo bụ usoro dị mma maka ndị ahịa na ndị ahịa iji hazie mgbasa ozi. Ọ na-aghọ akụkụ dị mkpa nke ahịa. Mmadụ asaa n’ime iri 10 B2B na-ele vidio oge ụfọdụ n’oge usoro ịzụ ahịa. Ghara ikwu, fọrọ nke nta ka pasent 80 nke ndị ahịa na-ahọrọ ikiri vidiyo ka ị gụọ banyere ngwaahịa.
Mgbasa ozi ahia gị nwere ike ịpụta site na iziga atụmanya vidiyo a na-ahazi nke gosipụtara uru ị bara uru n'ụzọ okike na itinye aka. Ojiji nke vidiyo na-enyere aka iwulite ntụkwasị obi na ịkụziri atụmanya. Ọ na - akwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya na atụmanya ma na - eme ka mmata gị mara.
vidREACH bụ email vidiyo na njikọ aka ahịa na-enyere ndị ahịa aka iru atụmanya site na njikọta nke vidiyo, ozi email na ozi SMS. Ikpo okwu na-enye vidiyo na email na-akpaghị aka na email ka mmekọrịta ọ bụla bụrụ nke onwe ya ma nye ya ohere ọ bụla.
E nwere ihe anọ dị mkpa na vidREACH platform - vidiyo, arụmọrụ, njikọta na nyocha.
Video - Vidio bụ ụzọ iji ruo ndị na-ege gị ntị ebe ha nọ. Site na vidREACH n'elu ikpo okwu, ị nwere ike ịdekọ vidiyo nke onwe gị, dekọọ ihuenyo gị, ma ọ bụ ọbụna jiri ọrụ ejiri rụọ ọrụ ka edere vidiyo maka gị. vidREACH na-enye gị ohere iwepụta vidiyo vidiyo ahaziri iche.
Oru oma - Ọru ọrụ na-enye ndị otu gị ohere izipu ozi ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị. Site na atụmatụ a, ị nwere ike ịhazi ma mepụta usoro ndu, mmekọrịta mmekọrịta, nkwukọrịta ndị ahịa na usoro ọrụ nchịkwa. Kọntaktị gị na-akpaghị aka site na usoro ọrụ nhazi oge dabere na otu ha si emekọrịta mmekọrịta gị. Nke a na-agbaso usoro na-agbanwe agbanwe ma na-abịa n'oge.
Mmekọrịta - Ọ bụ isi ihe dị na vidiyo gị iji nwee ike ịrụ ọrụ na ngwaọrụ ndị ọzọ na nyiwe ị na-eji, kpọmkwem maka mgbasa ozi. vidREACH na - ejikọtaghị ọnụ na Outlook na Gmail, yana yana nyiwe ndị ama ama dịka Salesforce, Facebook, Microsoft na LinkedIn.
Analytics - howmara otu esi etinye ozi vidio vidio gị dị mkpa. vidREACH gafere njikọ njikọ yana inye nchịkọta dị elu. Nwere ike ịlele mkpọsa vidiyo na arụmọrụ arụmọrụ ma lelee mkpesa ahaziri na ezigbo oge. Site na nchịkọta ndị a, ị nwere ike iduzi usoro mgbasa ozi gị na ahịa ahịa dabere na ihe na-arụ ọrụ na ihe na-adịghị arụ ọrụ.
Ndị a bụ isi atụmatụ ole na ole vidREACH na-enye ndị na-ere ahịa na azụmaahịa iji nyere aka ịhazi usoro email vidiyo:
Ihe ndebanye aha Email - nwere ike ịmepụta ahaziri email ndebiri na tupu mma ozi na gị reps nwere ike izipu atụmanya na Pịa nke a bọtịnụ.
Ihuenyo ihuenyo - Site na vidREACH n'elu ikpo okwu, ị nwere ike ịdekọ ihuenyo gị ma zipụ ngosi ngosi omenala na atụmanya gị.
Notima ọkwa n’ezi ozi - Ndị ọrụ na-enweta ọkwa oge ọ bụla mgbe mmadụ na-emekọrịta ozi email ma ọ bụ vidiyo ha zigara. Nke a na-enyere aka hụ na ị na-adị n'elu nzaghachi na ịghara ịhapụ atụmanya.
Teleprompter - Ederede nwere ike inye aka mgbe ị na-edekọ vidiyo. vidREACH na-enye ihe teleprompter ngwa dị na ya ka ị ghara ibute ihe ederede ahụ n'isi ma ọ bụ iji mee ka ị nọrọ na egwu ihe ịchọrọ ikwu.
Ndị ọkachamara n'ahịa na ndị ahịa gafee ụlọ ọrụ dị iche iche nwere ike iji vidREACH mee ihe. Oghere dị iche iche nke nwetaworo ihe ịga nke ọma gụnyere ile ọbịa, ụlọ, ịzụ ahịa, na ntụrụndụ. Ojiji nke vidiyo nwere ike mepee emepe ma pịa ọnụego.
ndị ọrụ vidREACH ahụwo a 232 percent abawanye na email emeghe udu mgbe eji vidiyo maka ọgbọ ndu na a Pasent 93.7 na-abawanye na nhọpụta na atụmanya site na ọpụpụ ndu ọgbọ. ndị ahịa vidREACH kere vidiyo 433,000, zipụ ozi ịntanetị 215,000 wee hụ 82 pasent vidiyo egwu egwu.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịpụ na igbe nnabata wee hụ ịpị aka na ntinye aka email yana ndị ndu ruru eru, gbalịa tinye a video email ikpo okwu na usoro mgbasa ozi gị.
vidREACH bụ ozi-e vidiyo nke ahaziri iche na ntanetị aka yana itinye aka na-enyere ndị azụmaahịa aka itinye ndị na-ege ha ntị, weta ọtụtụ nduzi na imechi ọtụtụ azụmahịa. Site na ebumnuche iji nyere ndị otu niile aka imezu ikike ha, vidREACH na-enye usoro usoro ọhụụ maka ndị ahịa na-achọ ịgbasawanye iru ha karịa usoro ọdịnala.
Tags: Na-atụ anyantinye akaahịa ahịaemail vidiyovideo email ikpo okwumgbasa ozi